Erayadan Waligaa Ha Ku Dhihin Qof Kansar Qaba | Xaqiiqonews
Erayadan Waligaa Ha Ku Dhihin Qof Kansar Qaba
Kansarka waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah cudurada ugu baahsan uguna badan ee dhimashada ku sababa ragga iyo dumar si siman.
XAQIIQO NEWS- CAAFIMAAD
Khubarada waxa ay leeyihiin, cudurka waxaa ka daran in bukaaanka uu cudurkabau arko “bar ceeb”, sababtoo ah hadallada kala duwan ee uu kala kulmaayo dadka ku hareereysan.
Webseetka Times News Now, waxa uu calaamadeeyey erayo ka xanuun badan cudurka laftiisam, kuwaasi oo ay habboontahay in aadan waliga kala hortagin qof xanuunsan.
1- Waxa aad Isku Keentay Ayaa Ku Haya
Qofka oo aad ku eedeysaa in hab nololeedkiisa ay ka mas’uul aheyd in uu cudurkan ku dhaco, waxa ay la mid tahay adiga oo tooreey wadnaha kaga muday bukaanka, kuna darso noocyo badan oo kansar waxa ay bukaanka ku soo gaaran qaab dhaxal iyo hiddo ah, waxaana dhici karta in uusan lug ku laheyn bukaanka.
Sidoo Kale Aqri..Muxuu Kansarka Ugu Badan Yahay Wadamada Qaboobaha Ah?
2-Isticmaal Daawo Dhireed.
Daawo dhireedka wax badan ayey ka tari karaan cudurada qaarkood, laakiin arintu marka ay kansarka taagan tahay wax door ah malahan, qof markii uu isticmaalo daawadii aad u sheegtay uusan waxbana iskga dareemin waxaa niyadda ka galeysa in aysan jirin wax “noolashiisa badbaadin kara”.
3- Naasaha Waad Ka Maarantaa
Kansarka naasaha ayey la dhibbanyihiin dumar badan, gaar ahaan kuwa da’da weyn, sidaa darteed erayada qaarkood oo inaad u isticmaasho laga yaabo waxa ay ku noqon karaan kuwo uga daran cudurka, bukaanka waxa uu dareemayaa in aysan jirin “cid daneyneysa”.
4- Cudurka Iska Daweey
Ogow kansarka waxa uu is-badal ku sameeyaa noolasha bukaanka oo dhan, bukaanka waa uu dagaalamaya, dadaalayaa meel kastana u galayaa sidii uu cudurka ugu adkaan lahaa, sidaa awgeed uma baahna erayo af dheeri ah sida “ka adkow cudurka”, erayadaasi waxa ay saameyn ku yeelan karaan caafimaadkiisa jir iyo maskaxba.
Maxaa Haboon In Aan Ku Dhahno Bukaanka?
-Taaageero u muuji iskuna day in aad fahanto xanuunka haaya
-Waxaaad ka weydiii xaaladiisa iyo waxa uu dareemaayo
–Isku day in aad kala sheekeysato, jadwalka daaweyntiisa iyo waqtiyada la ballami.
Ugu dambeyntii hadii aadan awoodin “erayo naxariis leh”, waxaa kuu fiican in aad afkaada ka qabsato intii aad ku dhihi laheyd waxyaaba in uu dhinto ku sii riixi kara.